Cajaladda: Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Wakaalada Badbaadada Codsiyada ee Dib-u-celinta Codsiyada iyo Siyaabaha looga Dhaafo Them
Kordhinta qalabka wax lagu qoro ee daaqadaha halkii ay ka shaqayn lahaayeen Macnidaamkii hore ee tiknoolajiyada tiknoolajiyadeed ee badanaa la yaabay sababaha isbeddelka. Dad badan ayaa ku dooday in tani ay sababi karto awooddaMac halka kuwa kale ay u arkeen inay sabab u tahay tiro badan oo isticmaala Windows, sidaas darteed waxay u keeneysaa hanti ku filan oo loogu talagalay shabakadaha internetka ee khawano.Nasiib darro, caan ka mid ah Mac ayaa la yimid korodhka tirada Trojans iyo cidhibta la xidhiidha oo ay suurtagal tahay in ay waxyeello u geystaan.
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare ,waxay diiradda saareysaa baahida loo qabo in la ilaaliyo maaha kaliya daalacayaasha laakiin sidoo kale codsiyada websaydhka.
Isha ku taala awoodda wadista shabakadaha internetka
Marka dadka isticmaala ay ku siiyaan macluumaad si ay u keydiyaan xogtaada, waxaa laga filanayaain ay sii ahaan doonto qarsoodi. Waxa aan la ogeyn waa in hacker websayd meel ay ku dhufaneyso hareerahaaga raadinaya daciifnimowaxay bartilmaameedsanayaan - 5 htp solgar. Mid kasta oo ka mid ah kuwan soo socda ayaa dhiirrigelin kara ujeedooyinkooda.
Ee ku dheh imtixaan Darteed.
Inaad lumiso shirkaddaada adoo adeegsanaya burburinta xogta.
Macluumaadka isticmaalaha qoraalka
Download macluumaad muhiim ah ee iibka ee suuqa madow. Kiiskan,ma tagaan wax raadraac ah oo sii wado waxyeello muddo dheer.
Sababaha sida loogu tala galay sababta shabakadaha shabakadaha internetka u diidaan codsi
1. Mawduucku waa sababta ugu weyn. Markaad dhisto internet wanaagsangoobta, waa in ay noqdaan kuwo tartan ah oo dareensan in ay dib u dhacaan ayna sameeyaan wax kasta oo suurtogal ah si ay u noqdaan kuwa ku habboon.
2. Sababaha siyaasadeed..Tani waa caddaynta kooxahan sida Anonymous orchestratekuwaas oo dhiirrigeliyay in ay weeraraan dawladaha iyo ururada diinta inay ahaadaan kuwo hadal ah.
3. Shaqaalaha xitaa sidoo kale waxay mararka qaar isku duba-ridaan dadka dibedda ka yimaada iyadoo ka dhalatay qanacsanaan la'aan.
Weerarrada soo noqnoqda ee soo noqnoqda
1. Weerarrada Cirbadaha ee SQL
Xaaladdan, ujeedada weerarka ee xogta waa in la xado, la burburiyo ama wax laga beddelomacluumaadka isticmaalaha. Tusaale ahaan, shabakadda internetka ee hacker-ka waxay hagaajin kartaa natiijooyinka dhaqaale ee shirkad waxayna sidoo kale xado macluumaadka muhiimka ah ee macaamiishasida lambarrada kaararka deynta.
2. Qorista Qoraaga Iskudhafka ah
Tani waxay ku lug leedahay gelinta xeerka xaasidnimada ah ee fuliya dhinaca dhibbanaha.
3. Diidmada Denbiyada Adeegyada
Tani waxay ku lug leedahay hal jinsi oo ah cinwaano IP ah oo loogu talagalay daadad goobta ah ee gaadiidka.Tani waxay ka dhigeysaa mid gaabis ah ama aan la heli karin muddo cayiman.
4. Codsiyada Dacwad-qaadista Talaadada
Isticmaalayaasha ayaa duped si ay u soo dejiyaan xariir ama sawir inta lagu jiro kalfadhin xaqiiqo ah oo caawiyamarka lagu daro weerarada xun.
Siyaabaha loo ilaaliyo hantidaada iyo isticmaalahaaga
Iyadoo codsiyada websaydhadu ay ku hareereysan yihiin dhammaan waxyaaba ay u nugul yihiin, ma jirto wax horumarin ahwuxuu jeclaan lahaa in uu khatar galiyo dadaalladiisa. Tani waxay ka dhigeysaa inay lagama maarmaan tahay in lagu daro tallaabooyinka ka hortagga marxaladaha bilowga ilaa kuwa ugu dambeeya. QaarkoodXalalka ayaa loo habeeyay hawlo gaar ah halka qaar kalena lagu sameeyo si joogto ah. Dib-u-eegista calaamadaha, raadintooda, iyo barnaamijyada buntukhawaxay ubaahanyihiin in la qabto inta lagu jiro lifaaqa codsiga. Haddii aad raadineyso xal gaar ah oo weerar ah waxaad dooran kartaa inaad fuliso isticmaalkaee CAPTCHAS, isticmaalka nidaamyada la keydiyay iyadoo la raacayo nidaamka tooska ah ama isticmaalka Shabakadda Internetka ee Daraasadda ee ilaaliya ama ka horjeedaweerarrada.